Iqela uyilo Ikubumbe sisitshixo seRabha kunye neTekhnoloji yeplastiki, zonke izinto zokubumba zeenxalenye zerabha kunye neenxalenye zesilicone zicwangcisiwe kwaye zayilwa liqela loyilo lokungunda, sinokukunceda ukusombulula iingxaki ezahlukeneyo zokubumba ukuba usizisela irabha okanye iiprojekthi zeplastiki. Amanqaku uyilo sokubumbela:
Eyona ilungileyo ngumngundo isakhiwo ukuqonda imveliso eliphezulu-ukusebenza.
Thobela iimfuno zomzobo, ulawulo olungqongqo lokunyamezelana.
Akukho-flash-line kwiindawo ezibalulekileyo zerabha okanye abicah iinxalenye.
Iindleko zomngundo kunye nobomi bokungunda.
Ebalaseleyo Iqhubekekisa Ukwenziwa Technology:
Chengda ngerabha & zeplastiki amagcisa abanobuchule ukuba iteknoloji ezibalaseleyo ukungunda kungamampunge kunye sengqondo ngokunyanisekileyo abazinikeleyo, yiyo loo nto sigcina ukugqwesa iimveliso siko irabha kunye nemveliso abicah yesiko entsimini lemveliso.
Uninzi amagcisa kunye nabasebenzi bakhonza Chengda ngerabha & Plastic iminyaka emininzi kwaye banamava atyebileyo ngumngundo kungamampunge, sinakekela zonke iinkcukacha ezincinane ekuqhubekekisweni, ukuqinisekisa imveliso ngqo ngqo kunye nexesha elide ubomi ngumngundo irabha okanye iimveliso zeplastiki.